​चेन्नईसँगको खेलमा सन्दीपले कति विकेट लेलान् ?
Fri, Sep 17, 2021 | 18:09:31 NST
Posted: Thursday, May 17, 2018 15:13 PM (3years ago )
काठमाडौं, जेठ ३ – नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पछिल्लो समय चर्चामा रहेका छन् ।
.@IamSandeep25 will look to keep up his good bowling form in #DDvCSK tomorrow! 😀
How many wickets will he pick?#DilDilli #Dhadkega pic.twitter.com/TCnkLbajWN
— Delhi Daredevils (@DelhiDaredevils) 17 May 2018
सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण दिल्लीले चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध पनि उतार्ने भएको छ । दिल्लीले सन्दीपले चेन्नईविरुद्धको खेल खेल्ने जनाउँदै उनले शुक्रबार कति विकेट लिन्छन् होला भनेर सोधेको छ ।
सन्दीपले कति विकेट लिन्छन् त्यो त भन्न गाह्रो छ । तर उनले महेन्द्रसिंह धोनी, सुरेश रैना, शेन वाट्सन, रवीन्द्र जडेजा, अम्बाती रायूडु, ड्वेन ब्राभोलगायतका विश्वकै उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानलाई बलिङ भने गर्नेछन् । १२ खेलबाट ६ अ‌ंक मात्र बटुल्न सफल दिल्ली प्लेअफबाट बाहिरिइसकेकाे छ । अब उसले चेन्नई र मुम्बई इन्डियन्ससँग मात्र खेल्न बाँकी छ ।
आशा गरौँ शुक्रबारको खेलमा सन्दीपले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै सबैको मन जितून ।